BARNAAMIJKA KU SAABSAN ISKUULKA
OHP waxay ka hawlgashaa barnaamijyo caafimaad oo afka ah oo ku saleysan afka iyo carruurta oo loogu talagalay Iskuulada Dadweynaha ee Degmada Green Bay oo aan lahayn ceymis, laakiin u qalma barnaamijka Qadada lacag la'aanta ah / Qiima dhimista ee iskuuladooda, ama ku jira Gargaarka Caafimaadka. Xirfadlayaasha ilkaha OHP waxay la safraan aaladda la qaadi karo ee ilkaha la geynayo iskuulada khatarta badan leh, waxaa lagu dejiyaa boos uu iskoolka ka helo, waxayna bixiyaan adeegyo farabadan oo ay ka mid yihiin baaritaanada ilkaha iyo ogaanshaha, raajada, nadaafada, daaweynta flooraydhka sunta, sealaha, buuxinta qoraalka , Koofiyadaha birta ka samaysan, iyo soo-saaridda.
Badanaa, ardaydu waxay u baahan yihiin ballamo badan si ay u dhammaystiraan daryeelkooda OHP kuma noqon doonaan dugsigooda in muddo ah. Haddii ay sidaas tahay, ardayga waxaa loo gudbin karaa mid ka mid ah goobahayaga go'an ee ku yaal Xarunta Kheyraadka Qoyska ee Howe Neighborhood, dhinaca bari Salvation Army Kroc Center, ama dhinaca galbeed ee OHP West meesha ballamaha dheeriga ah. Mararka qaarkood, ardayda leh baahiyo gaar ah (sida, Neefta, Autism) waxaa loo diraa Xafiisyada Baahiyaha Gaarka ah ee Isbitaalka St. Vincent ama Isbitaalka St. Mary si loogu sameeyo shaqadooda ilkaha.
Waaliddiinta doorbida in carruurtooda lagu arko mid ka mid ah rugaha caafimaad ee xaruntiisa OHP oo aan ahayn dugsiga, fadlan kala xiriir Xafiiska Maamulka OHP taleefan ama ka buuxi Foomka Xiriirka Khadka tooska ah si aad ballan uga qabsato.
BARNAAMIJKA SII BILAHA EE SII BILAHA
Kadib marka qorshaha daaweynta ilmaha la dhammaystiro, waxaa muhiim ah inay sii wadaan booqashooyinka ilkaha caadiga ah ee baaritaannada joogtada ah. Sababtaas awgeed, OHP waxay u baahan tahay in dhammaan bukaannada ka qeybgalaan Barnaamijkeenna Dib-u-celinta Lixda Bilood. Ilmo kasta waxaa la siin doonaa baaritaan, baaritaan (haddii ay jiraan), nadiifin, iyo daaweynta foloraydhka si loo hubiyo in ilkahooda ay caafimaad qabaan oo dhoolla caddeynta ay u sii dhalaalayaan sidii mustaqbalkooda.